धनाढ्यको सूचीमा अक्षय कुमार, कति छ सम्पति ? « Pen Nepal
धनाढ्यको सूचीमा अक्षय कुमार, कति छ सम्पति ?
Published On :6June, 2020 12:02 am By :
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार सय धनाढ्यको सूचीमा परेका छन् । फोब्र्स म्यागेजिनले सन् २०२० मा सर्वाधिक कमाइ गर्ने कलाकारको सूचीमा उनको नाम निकालेको छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी कमाउने मनोरञ्जन दुनियाँका सेलिब्रिटीको सूचीमा बलिउडबाट अक्षय कुमारमात्रै परेका छन् ।
यो सूचीको अक्षय कुमार ५२ औं नम्बरमा छन् । फोब्र्सका अनुसार उनले ४८.५ मिलियन डलर आम्दानी गरेको उल्लेख गरेको छ । अक्षय कुमारले हलिउड सेलिब्रिटी जेनिफर लोपेजलाई पनि उछिनेका छन् । उनले चलचित्र, विज्ञापनको माध्यमबाट आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
एक वर्षमा ४ वटासम्म चलचित्रमा अभिनय गरेका अक्षयको हातमा अहिले विज्ञापनको पनि कमी छैन । सामाजिक कथा बोकेका चलचित्रमा काम गरेपछि उनको करिअर चम्किएको छ । यो सूचीको पहिलो नम्बरमा केली जेनरको नाम छ । उनले यो वर्ष पाँच सय ९० मिलियन डलर आम्दानी गरेकी छन् ।